ကျွနုပ်နှင့်ဒုက္ခပေးသောဂျီမေးလ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » ကျွနုပ်နှင့်ဒုက္ခပေးသောဂျီမေးလ်
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Mar 22, 2012 in Computer & Cell Phone, Computers & Technology | 11 comments
ဒီညနေ အိမ်ပြန်ချိန်နားနီးမှ နိုင်ငံခြားသားတစ်ကောင်က တေလေဂျပိုး Website တစ်ခုက သတင်းကို ဖတ်ပြီး လန့်ဖြတ်တော့မူသတဲ့…
ဂျီမေးလ်အကောင့်မှာ “.” (dot) ပါတဲ့ကိစ္စ…
အချို့သော အီးမေးလ်လိပ်စာတော်တော်များများမှာ “.” ကုိုထည့်သုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်…
fattycat.mg@gmail.com (သတိ-ကျွန်တော့် အီးမေးလိပ်စာမဟုတ်ပါ)
အဲဒီအီးမေးလ်လိပ်စာကို Gmail မှာ Login လုပ်တဲ့အခါ “.” (dot) မထည့်ပဲ Password ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ Login ဖြစ်သွားပြီး Inbox ကိုရောက်သွားတာကို မြင်ရမယ်…အဲဒီတော့ fattycatmg@gmail.com ပိုင်ရှင်က fattycat.mg@gmail.com ရဲ့ Email တွေကို အမှတ်မထင် hack လုပ်လိုက်သလိုဖြစ်မယ်လို့ ထင်ချင်စရာရှိပါတယ်…
အဲဒီအကြောင်းကို Google က အောက်ကလင့်မှာရှင်းပြထားတယ်ဗျ…
fattycat.mg@gmail.com = fattycatmg@gmail.com
fattycat.mg@gmail.com = fatty.cat.mg@gmail.com
fattycat.mg@gmail.com = Fattycat.MG@gmail.com တို့တွေဟာ အတူတူပါပဲတဲ့….
အဲဒီအတွက် fattycat.mg@gmail.com ကို Create လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ နောက်ထပ် fattycatmg@gmail.com ဆိုတဲ့အကောင့်မျိုးကို ထပ်ပြီး Create လုပ်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်…ကိုယ့်အီးမေးလ်ထဲက အရေးကြီးစာတွေကို သူများမဖတ်နိုင်တော့ဘူး၊ လုံခြုံတယ်လို့ မှတ်ယူထားလိုက်ပါ…
Secure ဖြစ်တယ်လို့ Google ကတော့ ရဲရဲကြီးအာမခံသွားတယ်ဗျ…
အဲဒီကိစ္စကုို မလေ့လာပဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကီးဘုတ်သရမ်းသွားတဲ့သကောင့်သားကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာ…
အဲဒါနဲ့ပဲ ကုိုယ်ပိုင်အချိန်လေးထဲက ပဲ့ပါသွားပြီ တစ်နာရီလောက်…
ကျွန်တော့်လို သူငယ်ချင်းတွေ ဒီကိစ္စတွေ့ရင် အလွယ်တကူရှင်းနိုင်အောင်ရယ်…နားမလည်လို့စွတ်ကြောက်မိမှာစိုးတာရယ်ကြောင့် ပျော်မွေ့တဲ့ရွာထဲမှာပါ တစ်ခါထည်း ၀င်ရေးခဲ့တယ်ဗျို့
အလကားရတဲ့ Free Email တွေကို Official အတွက် မသုံးသင့်ဘူးနော်…
Free Service တွေဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်မရွေးဖြုတ်သိမ်းသွားနိုင်သလို…
Technical Support မပေးရင်လဲ ကိုယ့်ဘက်က ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကွယ်…
အဲဒါကြောင့် အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ Official သုံးမယ်လို့စဉ်းစားရင်တော့ ပိုက်ဆံပေးပြီး စိတ်ချရတဲ့ Service မျိုးရွေးသင့်တယ်ဗျ…
နောက်တစ်ခုက အလကားရတဲ့ဟာမို့ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ဆင်တူယိုးမှားလုပ်ုပြီး ကိုယ့်အိတ်ထဲကလာနှိုက်သွားရင်တော့ ကိုယ့်အမှားပဲဖြစ်မှာနော်…
ဂျီမေးလ်သုံးခဲ့တာ (၄)အချိန်တော်တော်ကြာနေပြီ။ Inbox ထဲမှာလဲ 2GB လောက်စာတွေရှိတယ်…စာတွေကလဲအရေးကြီးတယ်နော်…
အဲဒီအချိန်မှာ ဂျီမေးလ်က သူ့ Service ကိုဖျက်သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင်…
မြန်မာနိုင်ငံက ကော်နတ်ရှင်နဲ့ 2GB ကို Backup လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်…ကိုယ့်အရေးကြီးအီးမေးလ်တွေဆုံးရှုံးရမှာကို ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ပြီး ကြည့်နေရတဲ့ဘ၀ ရောက်သွားလိမ့်မယ်…
အဲဒါကြောင့်…Official Email သုံးချင်တယ်ဆိုရင်…ပိုက်ဆံပေးရပြီး စိတ်ချရတဲ့ Service ကိုရွေးပါ…
ဖရဲမ@gmail.com = ဖရဲမအခြောက်@gmail.com
ဖရဲမ@gmail.com = ဖရဲ.အခြောက်.မ@gmail.com
ကိုကြောင်ဖတ် ကောင်းမှုနဲ့ဂျီမေးလုပ်ရင် ဒေါ့ခံရမယ်ဆိုတာ သိသွားပါပြီ ။ စမ်းကြည့်ပါဦးမည် ။
myanmar.com.mm တွေက spam ကများ၊နှေးကနှေး။တစ်ချို့စာတွေဆို ဘာကြောင့်မှန်းမသိ မထွက် ဆိုတော့ တစ်လတစ်ခါတောင် မဖွင့်ဖတ်တော့ဘူး။ဂျီမေးနဲ့ပဲ ကွန်တက်လုပ်နေရတာ။
service သိမ်းလိုက်ရင်တော့ ဒုက္ခပဲနော်။
တစ်ခုခုတော့လွဲနေပြီ…ကျွန်တော်ပေးတဲ့ မတ်စိနဲ့ ကိုပေနားလည်သွားတာလွဲနေပြီထင်ပါ့…
အချို့အကောင့်တွေမှာ “.” (dot) ထည့်ပြီးလုပ်ထားတာရှိတယ်…
အဲဒီလိုထည့်ထားခြင်းဟာ Email Address ပေါ်မှာ Effect မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာ…
myanmar.com.mm တွေက သိပ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်…အပြင်မနေပြီး ကိုယ်ပိုင် Domain တစ်ခုယူလိုက်ပါ…ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့ အီးမေးသုံးပေါ့…
Google ကနေပြီးတော့ ပိုက်ဆံယူပြီးပေးတဲ့ Service ရှိပါတယ်….
ကိုယ်ပိုင် Domain Name အတွက် တစ်နှစ်ကို $10 ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး…
Email Service အတွက် တစ်လကို $5 ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်…
တကယ့်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်…တစ်နှစ်စုစုပေါင်း $70 ဆိုတာ လွမ်းလောက်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာမို့…၀ယ်သုံးခြင်းကို အားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ…
သုံးချင်ရင် အသုံးပြုလို့ရအောင် Link လေးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်…
အခု ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ…Online Paymentတွေကို Service ပေးနေတဲ့လူတွေရှိနေပါပြီ…ငွေပေးချေခြင်းအတွက်လဲအဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့…
တကယ်အရေးကြီးရင် License ၀ယ်သုံးကြပါ…
ဒီမှာတင် ဒိုမိန်းဝယ်သုံးရင် အီးမေးလ်းဆားဗစ်ပါ မပါဘူးလား။
တူလေး ဖက်ဖက်ကက်သိရင် ပြောပါဦး..။
ဟယ် …. ဖရဲမကသူဂုဏ်သူဖော်လိုက်တယ်တော့ ….
ရတနာပုံတယ်လီပို့ကနေပြီးတော့ Domain ၀ယ်သုံးလို့ရပါတယ်…
အဲဒီလိုဝယ်သုံရင် http://www.parlayyar.com.mm လိုမျိုး Domain Name နဲ့ရမှာဖြစ်ပြီး…
သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Email အခုအရည်အတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…(၁၀)ခုဆို (၁၀)ခုပေါ့…
အဲဒီမှာ com.mm ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က မြန်မာနိုင်ငံမှ Domain Name လို့ ဆိုလိုတယ်ပေါ့…
အဲဒီအတွက် World Wide အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှ သုံးရတာသိပ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်…
နောက်တစ်ခုက Cost Effective ပါ…
မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဒိုမိန်းဝယ်ရင် အနည်းဆုံး တစ်သိန်းလောက်ကျပါတယ်…
လစဉ်ကြေးတော့သေချာမသိပေမယ့် အပြင်က Domain ၀ယ်သုံးတာထက် ဈေးကြီးတာတော့သေချာပြီးသား…
နောက်တစ်ခုက ပြန်ရတဲ့ Service ပါ…Google ကပေးတဲ့ Service ကို ရတနာပုံတယ်လီပို့က မီအောင်မပေးနိုင်ပါဘူး…အဲဒီတော့ World Wide ဖြစ်တဲ့၊ Service ပိုကောင်းတဲ့၊ ဈေးသက်သာတဲ့ အပြင်က Domain တွေကို ၀ယ်သုံးတာက ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ…
အလကား အီးမေးတွေ အလကား ဖြစ်ပေါင်းတော့ မနည်းဘူး။
အခု သုံးတဲ့ ဂျီးမေးပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဂျီမေးကတော့ တော်တော် အကြောတင်းတယ်။ သုံးနေတာ သက်တမ်းကြာနေပြီ ဆိုတော့ အဆင်တော့ ပြေနေသေးတယ်။
သူငယ်ချင်းကတော့ ၁၀၀% ပြည့်သွားလို့ အလိုလို ပိတ်သွားတာ ဘာ အချက်အလက်မှ ပြန်မရတော့ဘူး ပြောတယ်။ အမှန်တော့ ဖော်ဝပ်မေးတွေက ရှုပ်နေတာ.. အဲဒါကြီးတွေကြောင့် အီးမေး ဆိုဒ်ပြည့်သွားတာ.. ဒါကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ အီးမေး ဆို ဖတ်ပြီးတာနဲ့ အကုန်ပြန်ဖျက်တယ်။ ကြာကြာ ၀ါးမဲ့ သွား အရိုးကြည့်ရှောင် ဆိုသလို ကြာကြာ သုံးရအောင်။
ဒါဆို မဆူးပြောသလို အရိုးကြည့်ရှောင်ရင်ရော….သက်တမ်းဘယ်လောက် ခံနိုင်လဲ။ မဟုတ်လို့ အများကြီးကို ပျက်သွားရင် နှမြောစရာ…။
ကြိုက်တယ်ဗျာ ဒီပို့စ်ကိုတော့ ဆိုက်တစ်ခုလုံးမှာ ..ကျန် ပို့စ်တွေတော့ ဘာတွေမှန်းကိုမသိဘူး ထွေးလိမ်နေတာဘဲ #_#